Uwe mmiri ozuzo-PVC mmiri ozuzo
Uwe mmiri ozuzo-PU mmiri ozuzo
Uwe mmiri ozuzo-Eva Peva Raincoat
Rainwear-ịkwanyere / Polyester Raincoat
Uwe mmiri ozuzo-Pee poncho
Rainwear-naịlọn mmiri ozuzo
Uwe elu jaket
Ihe dị n’èzí
COVID-19 mere ka ndị mmadụ nwekwuo akpa ahụ
site ha na 20-07-10
Ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa na-ekwu na a pụrụ ibelata azụmaahịa nke anụ ọhịa mgbe ọrịa oria na-efe efe mechara. Ha kwuru na nje a nwere ike bido n’ahịa a na-ere anụ ọhịa na China. Nje virus a sitere na ụsụ ma ọ bụ anụmanụ a na-akpọ pangolin. Ọ gafere ...
COVID-19 mere ka ọtụtụ ndị yi uwe mwụda
site ha na 20-07-03
Mgbasa nke COVID-19 coronavirus emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ yi uwe mwụda nke iche na aka ha, Shijiazhuang idozi ejiji co.ltd na-emepụta uwe nke isalation. Ihe onwunwe bu CPE. soshal midia na-akọ na ka ọtụtụ ndị mmadụ na-eyi akwa iche ma na-akwọ aka ha ...
Anyị ụlọ ọrụ pụrụ iche na iche iche nke mmiri ozuzo na mmiri ozuzo poncho na ugwu China, anyị na ngwaahịa na-tumadi ebupụ Switzerland. China-Switzerland FTA, nke gbahapụrụ ọtụtụ ụtụ isi na ngwongwo, bidoro na July 2014. Azụmaahịa mba abụọ abawanyewo nke ukwuu kemgbe mmejuputa nke ...
No.151 Zhongshan ọdịda anyanwụ Road, Shijiazhuang, China